Pyae Phyo (MMiTD): August 2013
ဒီတခါကျနော် android တွေအတွက် unlocker tool တခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ..ဒီကောင်လေးက နှစ် နှစ်အတွင်းမှာ user ပေါင်း ၁၀၀၀၀၀၀၀ ကျော်အသုံးပြုထားတာပါ။သူ့ support တဲ့ android version တွေကတော့ 2.2 ကနေ 4.0.3 ရဲ့နောက်ဆုံး version ထိ support လုပ်ပါတယ်..ဖုန်းအမျိုးအစားတွေကတော့...
Samsung Galaxy S / S2/ S3/ Note /
Note2/ HTC One X /
Amazon Kindle fire / HD 7"
အစရှိတဲ့ဖုန်းတွေကို support လုပ်ပေးပါတယ်..ကဲ သူ့ရဲ့ feature တွေကို အောက်မှာဆက်ဖတ်လိုက်ကြပါ..
Unlock Root has over 10,000,000 users around the world. It has2years of development. On December, 2012, Unlock Root Pro launched. It supports Android 2.2-2.3, 4.0.3 and even the hottest and latest devices, such as Samsung Galaxy S/SII/SIII, Note/Note 2, HTC One X, Amazon Kindle Fire/HD 7″,Google Nexus 4/7/10, etc. It is the safest root software and provided with restore function. You can successfully root your device in5minutes. We guarantee 100% refund if failed. What’s more, Unlock Phone is free of cost if you purchased Unlock Root Pro.
Download here->> https://www.dropbox.com/s/gmsgrpdeyhhx5ix/UnLock%20Root%20Pro%204.1.1.0.rar
အမျိုးအစား: Android Unlock
Laptop မှာ Android Phone တစ်လုံးကို Wireless Mouse အဖြစ်အသုံးချခြင်း
မင်္ဂလာပါ..ကျွန်တော် Myanmar IT Helper ပါခင်မျ..ကနေ့တော့.
Laptop မှာ Android Phone တစ်လုံးကို Wireless Mouse အဖြစ်အသုံးချနည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ခင်မျ..ကဲ..ဘယ်လိုလုပ်မလဲ စလိုက်ရအောင် ..
Download Mouse Server
Download Wifi Mouse Pro=>Link1/Link2/Link3/Link4
အသုံးပြုပုံကတော့mouse server ကိုကွန်ပျူတာမှာinstallလုပ်ထားပါphoneကနေwifiလွှင့်ပြီးတော့
ပေးထားတဲ့wifi mouse ကိုဖွင့်လိုက်ပါAuto Connect ကိုနိတ်ပါ
Andriod ဖုန်းပေါ်မှာ Hacking သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာလို့ရမယ့် Hackers Home Pro v 2.1 apk free download
Hacking ကို ၀ါသနာပါ သူများ အတွက် hacking tutorial သင်ခန်းစာများကို andriod ဖုန်း ပေါ်မှာ
လေ့လာ လို့ရ မယ့် Hackers Home Pro ဆို တဲ့ hacking လုပ်တဲ့နည်းတွေကို သင်ခန်းစာ၊ video သင်ခန်းစာ နဲ့hackဖို့ အတွက်လို အပ်တဲ့ ဆော့ဝဲ တွေ ဒေါင်းနိုင်တဲ့လင့်တွေပါ ၀င်တဲ့ app လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာ ဘာသာနဲ့ တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ ဒါပေမယ့် simple english နဲ့ ရေးထားတဲ့အတွက် လွယ်လွယ်နားလည် နိုင်ပါတယ် ။ပါဝင်တဲ့ hacking သင်ခန်းစာတွေက တော့ တော်တော်စုံပါတယ် ဘာ hack နည်းတွေ လေ့လာလို ရမလဲဆိုတာ အောက်မှာ ဖတ်သွားကြည့်ပါအုံး သဘောကျလို့ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါင်းသွားလို့ ရပါတယ်။
ပါဝင်သော hacking သင်ခန်းစာများ
-social network hacking
-website hacking (SQL injection)
-backtrack5tutorials
-email hacking (gmail/yahoo and all email service)
-window tricks and hacking
-how to create virus
-how to network and internet speed up optimize
စသည့် hacking toturials ပေါင်း 1730 ကျော် ကို စာအနေနဲ့ ကော video အနေနဲ့ ပါ လေ့လာ နိုင်မှာပါ။
DOWNLOAD HERE (HACKERS HOME PRO APK 1.51MB)
link24shared
Posted by Aung Hy (Anti Lobby)
Windows7Manager 4.3.1 + Keygen
Windows7Manager နောက်ဆုံးထွက် Version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ 32bit & 64bit အားလုံးအ တွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ။ Window7ရဲ့ Operating System တစ်ခုလုံးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Error အားလုံး ကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Window ကလေးလံနေတယ်ဆိုရင်လည်း မြန်ဆန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ Optimizer နဲ့ Cleaner ဆိုတဲ့ Tools တွေပါဝင်ပါတယ်။ အခြားသော အသုံးတည့်မယ့် Tools တွေလည်းပါဝင် ပါသေးတယ်ဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Keygen ကိုပါထည့်ပေးထားပါ တယ်။ လုပ်ဆောင်ချက် အသေးစိတ်လေ့လာချင်ရင်တော့အောက်မှာရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ
အမျိုးအစား: Maintenance , Tools , Window
ရမ်ဘိုလို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Game Contra Evolution v1.1.0 Apk
ကျွန်တော်တို့ 2တန်း 3တန်းလောက်တုန်းက Family Game လေးမှာ ရမ်ဘို Game ကို အရမ်းကိုသဘောကျ ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့နဲ့ အမေရဲ့ အဆူအဆဲခံပြီး ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ Game လေးပေါ့ဗျာ။ အခုလည်း အဲဒီ Game လေးကို Android ပေါ်မှာကစားရဦးမှာပါဗျာ။ ကျွန်တော်ကစားပြီးသွားပြီဗျ။ မိုက်တယ် တော်တော် သဘောကျတယ်ဗျာ။ နောက်တစ်ခေါက် အမေ့ရဲ့အဆူခံရဦးမလားမသိပါဘူးဗျာ။ Game အကြောင်းတော့ မရှင်းပြတော့ဘူးနော်။ လူတိုင်းသိပြီးသားပါ အောက်မှာလည်း Screen Shoot တွေရိုက်ပြထားတော့ သိမယ် လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ စပြီးကစားနိုင်ပါပြီဗျာ။ File Size ကလည်း 17MB ဘဲရှိလို့ ဒေါင်းလို့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။
RonyaSoft CD DVD Label Maker v3.01.19 + Keygen & Serial
CD/DVD Label Maker ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Software လေးတစ်ခုတွေ့ထားလို့ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ Software ထဲမှာ ပါပြီးသား Design တွေကလည်းစုံလင်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင်မိမိ Design နဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးချင်လည်း ရပါတယ်။ Photoshop မှာ ရေးဆွဲနိုင်ပေမယ့် လည်း CD/DVD ရဲ့ဆိုဒ်ကိုချိန်ညှိ ရဦးမှာပါ။ အခုတင်ပေးထားတာကတော့ CD/DVD ရဲ့ဆိုဒ်ကိုချိန်ပြီးသားပါ တစ်ခါတည်း ဖန်တီးပြီး Print တန်းထုတ်ရုံပါဘဲ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Keygen နဲ့ Serial Key ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အဆင်ပြေတာနဲ့သာအသုံးပြုကြပါနော်။
အမျိုးအစား: Design , DVD Creator
Keyboard Pro Crack Version ( Android Application )
Frozen Zawgyi KeyPro Crack Version
ဘယ်တော့မှ experia date မဖြစ်တော့ဘူး
လိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက် . . :)
Download => Link 1 / Link 2
လစဉ်ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေနှင့် လက်ကျန်ငွေများကို သိရှိနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်မတိုင်း
ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဗားရှင်းက ၂.၃ပါ။ Android version 2.3 နှင့်အထက်မှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လစဉ်ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေနှင့် လက်ကျန်ငွေများကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်
သောကြောင့် အသုံးချသင့်သော ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Download=>> Link 1, Link 2
ကားရှိသူတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း Apk (5.3MB)
Andriod ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် မြန်မာလိုရေးသားထားတဲ့ ကားပြုပြင်ရေး ဆော့ဝဲလ်လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကို အသေးစိတ်ရေးပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
ဗားရှင်းက ၂.၀ပါ။ Android version 2.2 နှင့်အထက်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းအသစ်များနဲ့ Temple Run: Brave v1.5 apk For Android Game (Unlimited Money)
Temple Run ကတော့လူတိုင်းသိပြီးသား လူကြိုက်များ Game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခုလည်း 17-Aug နေ့ ထွက်ထားတဲ့ Version အသစ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခုထွက်လာတဲ့ Version အသစ်မှာတော့ ယခင် Version အဟောင်းနဲ့မတူတော့တဲ့ ပုံစံအသစ်တွေနဲ့ ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကစားသူများအ တွက် တမျိုးဆန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကစားနိုင်အောင် ပိုက်ဆံတွေကိုပါ Hack ထားတဲ့ Unlimited Money အနေနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးကစားရုံပါဘဲ။
Angry Birds 3.2.0 APK Unlimited Everything For Android
Angry Birds ချစ်သူများအတွက် Angry Birds 3.2.0 APK နောက်ဆုံးထွက် Version ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ။ Apk ဆိုတော့ Android Phone အတွက်သီးသန့်ပါဘဲနော်။ အခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကတော့ Hack ထားပြီးသား Game လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အဆင့်အားလုံးကို Hack ထားပြီးသားဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေး ကစားချင်တဲ့အဆင့်ကို တန်းပြီးကစားရုံပါဘဲ။ Unlimited ပေါ့ဗျာ။ အခု Game ကိုကစားဖို့အတွက် Android OS 2.3.1 နှင့်အထက်ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။
Programming လေ့လာနေသူများအတွက် Java developerguide (မြန်မာလို) (4.2MB)
Programming လေ့လာနေသူများအတွက် Java developerguide (မြန်မာလို) စာအုပ်လေးတင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ Programming လေ့လာနေသူများအကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။ စာမျက်နှပေါင်း ၂၂၅ မျက်နှာပါဝင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာဂျာနယ်ရဲ့ စုစည်းမှုလေးပါခင်ဗျာ။ Programming လေ့လာနေသူများ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် မန်ဘာဝင်ပြီး၊ Facebook Like လုပ်ခြင်းဖြင့်အားပေးပါ ခင်ဗျာ။ အားလုံးကိုခင်မင်လျှက်.........
ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် အမြန်ဆုံးထည့်ပေးမယ့် EZCharge2Apk (9.7MB)
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မြန်မာမိုဘိုင်းဂရုကတွေ့လို မလာပြီး ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ကို
install လုပ်ပြီး ငွေဖြည်ကတ်က လျှို့ဝှက်နံပါတ်တွေကိုချိန်ပြီး scan ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ scan လုပ်နေတုန်းတော့ လက်ငြိမ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။ Android version 3.0 နှင့်အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲကြိုက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မိမိဖုန်းအထားမှား ရင်သော်လည်းကောင်း၊ အနီးအနားမှာရှာမတွေ့ရင်သော်လည်းကောင်း လက်ခုပ်တီးပြီး
ဖုန်းရှာလို့ရမယ့် clap to find apk လေးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ခုပ်တီးလိုက်တာနဲ့ ဖုန်းက မိမိပေးထားတဲ့ အသံလေး ထမြည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်စမ်းသပ်ထားပြီးသားပါခင်ဗျာ။ အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ ဆော့ဝဲလ်
လေးဖြစ် ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ကိုဖွင့်ပြီး လုပ်ရမဲ့အဆင့်လေးတွေကို ကျွန်တော် Screenshot ရိုက်ပြီး ပုံလေး
တွေနဲ့ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိမိနှစ်သက်ရာသီးချင်းလေးတွေကိုringtone အဖြစ်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆော့ဝဲလ်ကိုဖွင့်ပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ပြန်ထွက်တဲ့အခါ Close မလုပ်ပဲနဲ့ Minimize လုပ်ပေးပါ။ ဒါမှ အသုံးပြုလို့ရမှာပါခင်ဗျာ။
Andriod ဖုန်းမှာ ဘောလုံးကစားချင်သူများအတွက် PES 2012 football game for andriod (Data+Apk)
PES football game for andriod(2012) Apk + data Andriod ph ပေါ်မှာ football game ကစားချင်သူများလည်း ဒေါင်းသွားကြပါ ။ ရုပ်ထွက်ကောင်း ကစားလို့ ကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပါ ။ဒီဂိမ်းကို ဖုန်း
ကနေ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းချင်သူများအတွက် data rar ဖိုင်ဖြည်တဲ့အခါလွယ်ကူအောင် unrar for andriod
apk လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် ။
DOWNLOAD HERE (PES 2012 ANDRIOD >data /151.31 MB)
DOWNLOAD HERE (PES 2012 FOR ANDRIOD >apk/5.33MB)
1။ဖိုင်တွေဒေါင်းလို ပြီးပြီဆို ရင် apk ဖိုင်ကို ဖုန်းမှာ install လုပ်ပါ
2။Data ဖိုင်ကို rar ဖြည်ပါ။ဖိုင် ဖြည်ရင် com.konami.pes2012ဆိုတဲ့ ဖိုင်floderလေးရလာမယ် အဲဒီဖိုင်ကို file/andriod/ data/here မှာ သွားထည့်ပါ။
(copy >paste နဲ့ ထည့်ထည့် move နဲ့ ထည့်ထည့် ရပါတယ်)
ဖုန်းနဲ့ တိုက်ရိုက် ဒေါင်းသူများ data rar file ဖြည် ဖို့ အတွက်အောက်မှာ unrar for andriod apk ဒေါင်းပါ
(ကိုယ့် ဖုန်းမှာ rar ဖိုင်ဖြည်တဲ့ apk ရှိပြီးသူများဒေါင်းစရာမလိုပါ)
DOWNLOAD HERE (unrar for andriod apk /580KB)
Netguide Journal Vol (2), Issue (99) (28.8.13)
NetGuite ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဒဟူးနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ NetGuide ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ NetGuide ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ NetGuide Journal Vol(2), Issue (98)ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 21 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
မင်္ဂလာပါ..ကျွန်တော် Myanmar IT Helper ပါခင်မျ..ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Myanmar Fonts အလှလေးများကို စုစည်းတတ်သူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်....
CE, King, Matrix, Acadamy, Ayar, Art house,
Shwe Thway, U4, U4 Myanmar, အပြင် အခြား
သော အလှလေးတွေ ဒီဇိုင်းအတွက် သင့်တောမည့်
ဖောင့်လေးတွေ စုစည်းပီး တစ်ဖိုင်တည်းတင်ပေး
လိုက်ပါတယ်။ ဖိုင်စိုက်ဒ်ကတော့ 15.27 MB တိတိ
iCare Format Recovery Pro v5.2.0.0 + Serial
Recovery Software တွေထဲမှာ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး Software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ iCare Format Recovery ကို Version အသစ်လေးထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အရှေ့က Post တွေမှာလည်း ထွက်သမျှ Version တိုင်းတင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ နောက်ထပ်အသစ်ထွက်တိုင်းလည်း တင်ပေးသွားမှာပါ။ ဘာကြောင့် အမြဲတင်ပေးရ တာလည်းဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အရမ်းကိုသဘောကျလို့ပါ။ iCare ကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ Data တွေပြန်ရခဲ့တာ အကြိမ်ကြိမ်ပါဘဲဗျာ။ ဒါကတော့ ကိုယ်တွေ့မို့ ညွန်းရဲတာ ပါ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Serial Key ကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
အဆင့်မြင့် Photoshop Magic Click (Vol 1 စာအုပ်) မြန်မာလို ( 2013 ** New ** )
မင်္ဂလာပါ .. ကျွန်တော် Myanmar IT Helper ပါခင်မျ..ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့..
ဆရာ U Sann Oo (MIS, Mandalay) ရေးသားထားတဲ့ အဆင့်မြင့် Photoshop Magic Click (Vol 1 စာအုပ်) မြန်မာလို စာအုပ်အသစ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်မျ... Photoshops လေ့လာနေသူများအတွက်ကတော့ တကယ့်ကို ဂွတ်ရှယ်ပါဘဲခင်မျာ
အုပ်လေးထဲမှာ "Texture အသုံးပြုခြင်း"
"Flame effect ပြုလုပ်ခြင်း"
အရမ်းကောင်းတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ပါဝင်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်လို့ လေ့လာထားကြပါလို့.
Zawgyi font အလန်း
ဒီလိုမျိုး font ပုံစံလေးလိုချင်ရင် Download
Open လိုက်ပါ install နှိပ်ပါ
Replace မေးရင် Yes နှိပ်ပါ ကွန်ပျူတာ ကို restart ချပါ
Lattop battery ကိုသက်တမ်းကြာကြာထိန်းသိမ်းပေးမယ့် battery care 0.9.14 free download
lattop ရဲ့ battery လေးကို အကောင်းဆုံးလေးနဲ့ သက်တမ်းကြာကြာလေး ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မယ့်
Battery Care software လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် lattop တလုံးမှာ battery က အပျက်များတတ်
ပါတယ် အပြင်သွားလို့ lattop သယ်သွားချင်ရင်တောင် battery ကမကောင်းတော့ ယူလိုမရ ပလပ်
အမြဲထိုးသုံးနေရ ရင်တော့ lattop ရဲ့ အရသာပျက်တာပေါ့ ဗျာ။ ဒီတော့battery ကောင်းတုန်းလေး
မှာ စောင့်ရှောက်ပေးမယ် ဆော့ဝဲလေးနဲ့ သုံးရင် ကြာကြာကောင်းကောင်း သုံးရတာပေါ့ ။လိုချင်သူများ
lattop တလုံးမှာဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲ ပါ ။
DOWNLOAD HERE (BATTERY CARE 1.4MB)
အမျိုးအစား: Battery care
Android Phone မျိုးစုံ Root လုပ်နည်း Ebook (ပုံနှင့်တကွရှင်းပြထားသည်)
ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးကို မိတ်မဆက်ခင်မှာ ဒီစာအုပ်လေးကိုရေးသားထားတဲ့Chateau Man ကိုတော့ Credit ပေးချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီစာအုပ်လေးကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် Chateau Man ရဲ့စေတနာတွေနဲ့ ပညာတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီးပြီး လူသုံး အများဆုံး Android Phone တွေဖြစ်တဲ့Samsung , Huawei , HTC , Sony , LG အစရှိတဲ့ ဖုန်းတွေရဲ့ Model မျိုးစုံရဲ့ Root လုပ်နည်းတွေကို ပုံနဲ့တွ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းဆီအလိုက် Root လုပ်နည်း တွေကို ပုံနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်လို့ လူတိုင်းလိုက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ စာအုပ်ရဲ့ File Size ကလည်း 7.49MB သာရှိတဲ့အတွက် အလွယ်တကူဒေါင်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Andriod Rooting , Android , Ebook , Root
AVG PC Tuneup 2014 14.0.1001.38 Beta + Activator
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ အသုံးတည့်မယ့် Tools ပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ AVG PC Tuneup 2014 14.0.1001.38 Beta နောက်ဆုံးထွက် Version ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုခြင်း အားဖြင့် မိမိရဲ့ PC ဟာ ယခင်ထက် ပေါ့ပါးသွက်လက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Recovery ဆိုတဲ့ မှား ဖျတ်မိတဲ့ Data တွေကို ပြန်လည်ရယူပေးနိုင်တဲ့ Feature လည်းပါဝင်ပါတယ်။ Uninstaller , Cleaner , Optimizer တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုတော့အောက်မှာလေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Full Version အဖြစ် Activator ကိုပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
· Removes junk files slowing down your computer
· Defragments disk drives and optimizes system files placement
· Repairs thousands of registry errors to increase PC stability
· Compacts the registry eliminating memory-consuming gaps
· Finds bad sectors, lost clusters and directory errors and fixes them
· Tailors the one-size-fits-all settings to your specific Internet connection
· Removes the history of your computer and Internet usage
· Wipes free space on disks to prevent the recovery of sensitive data
· Erases selected files beyond recovery onadisk or USB stick
· Recovers accidentally deleted files from disks, USB sticks or cameras
· Helps to find and remove duplicate files that waste disk space
· Disables unnecessary services slowing down your computer
· Allows to manage programs that start automatically on Windows boot
· Completely uninstalls the software programs that you
· no longer need
· Allows to tune hundreds of Windows settings to increase your PC speed
· Lists all running processes, services and locked files
· Shows which files take up the most space on your computer
· Provides detailed information about your hardware and software.
အမျိုးအစား: Cleaner , Maintenance , Recovery , Registry
ဆရာသန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) ရေးသားတဲ့ Android ပေါ်မှ လက်တွေ့အသုံးချနည်းပညာ (မြန်မာလို) (18MB)
ဆရာသန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) ရေးသားတဲ့ Android ပေါ်မှ လက်တွေ့အသုံးချနည်းပညာ (မြန်မာလို) စာအုပ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်တွင် Android နှင့် လေ့လာသိသင့်စရာများ၊ Android နှင့် အသုံးချ Setting ဆိုင်ရာ၊ Application များထည့်သွင်းနည်းများ၊ Root လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပြုလုပ်ရခြင်းအကြောင်း၊ Cutom ROM ကိုလေ့လာခြင်း၊ မသိမဖြစ်၊မရှိမဖြစ် Application များ၊ သိထားလေ့လာအဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ ကွန်ပျူတာမှာ တင်သုံးမယ့် Android OS အကြောင်းတို့ကိုပြည့်စုံစွာရှင်းပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
▼ August ( 144 )
Laptop မှာ Android Phone တစ်လုံးကို Wireless Mouse...
Andriod ဖုန်းပေါ်မှာ Hacking သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာလ...
ရမ်ဘိုလို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Game Contra Evolution v1...
RonyaSoft CD DVD Label Maker v3.01.19 + Keygen & S...
Keyboard Pro Crack Version ( Android Application )...
ဒီဇိုင်းအသစ်များနဲ့ Temple Run: Brave v1.5 apk For...
Angry Birds 3.2.0 APK Unlimited Everything For And...
အဆင့်မြင့် Photoshop Magic Click (Vol 1 စာအုပ်) မြ...
ဆရာသန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) ရေးသားတဲ့ Android ပေါ်မှ လက်ေ...
Auto CAD သင်ကြားခြင်း စာအုပ် Module (1) အသစ် ** 20...
နာမည်ကြီး V Root ခေါ် Root Master ဗားရှင်းသစ် 1.6 ထ...
Mobile ဖုန်းကနေ ဘောလုံးပွဲတွေ ကို တိုက်ရိုက် ကြည့်...
Widgetများကိုscroll box နဲ့ ထားချင်သောဘလော့ဂါလူသစ်...
C++ Vol2(မြန်မာလို) (3.42MB)
C++ Complete (မြန်မာလို) (4MB)
online က နေ ဘောလုံးပွဲ တွေ ကို တိုက်ရိုက်ကြည့်လို ...
Android ဖုန်းမှာ သာယာချိုသာတဲ့ ငှက် တေးသံလေးတွေနဲ့...
Notepad ကို အသုံးပြုပြီး စာ က နေ အသံ ထွက် ပြောင်းေ...
စက်ရုပ် Game - Real Steel HD v1.2.5 Apk
PC Auto Shutdown v5.6 + Key
Stardock Start8 v1.20 Windows 8 အသုံးပြုနေသူများအတ...
Photoshop ဖြင့် Animation ပြုလုပ်ခြင်း EBook ( မြန...
Bagan Keyboard Pro v1.6.3 APK For Android
WinX DVD Ripper Platinum v7.3.0 Build 20130819 + K...
Advanced SystemCare Pro v6.4.0.289 Multilanguage +...
ScreenSteps Pro v2.9.6 Build 11 + Serial & Keygen ...
ကွန်ပျူတာထဲက Programs တွေကို ဖြုတ်မရ ဖြစ်နေသူများ...
WinRAR 5.00 Beta 8 (x64x86) + Themes – Cyclonoid
WinX HD Video Converter Deluxe v4.0.0 Build 2013.0...
Internet Security 2014 v14.0.0.4651 Final P2P
Netguide Journal Vol (2), Issue (98) (21.8.13)
မိမိရဲ့ဖုန်းကို ဖလန်းဖလန်းလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ TSF Shel...
အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (၁၄) အမှတ် (၃၂) (20.8.13)
Maxthon v4.1.2.2000 Portable
Mozilla Thunderbird v17.0.8 Portable
Android နဲ့ iOS ကနေ Premier League Live ကြည့်လို့ရ...
Computr ရဲ့ နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်တွေပြန်ကြည့်လို့...
အင်တာနက်ဂျာနယ် ၊ NetGuide တို့မှာပါတဲ့ Sodokuကို လ...
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 15 (19.8....
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-116 (19.8.13)
Fruit Ninja HD Game Free Download For PC
EMCO Network Malware Cleaner v4.8.50.125 + Keygen
Firmware တွေအားလုံးစုစည်းပေးထားတဲ့ MP Firmware
Dungeon Hunter3Mod Apk + Data v1.5.0 ALL Unlimit...
ကွန်ပျူတာ သမားတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ Hiren’s BootCD...
ကွန်ပျူတာသမားအားလုံးအတွက် HDD Regenerator လေးတစ်ခု...
I'm Jack (ခုန်ပျံကျော်လွှား အန္တရယ်များ) (myanmar an...
Men In Black3Mod Apk + Data v1.0.4 Unlimited TTP...
Invasion zombie apocalypse Mod Apk v2.0.1 Unlimite...
Popular Post Style လှလှပပလေးတွေနဲ့ အလှဆင်မယ်....
iOS7 Skin Pack v.7.0 2013 (x86/x64) For Window 7
Multi Password Recovery 1.2.9 ML Portable
ငွေဖြည့်ကဒ်သုံးကဒ် နှင့် Kaspersky Antivirus 2013 ...
MPT Service V1.0.0
Mac OS X Lion Launchpad For Window XP ,7& 8 (x64...
Simpo PDF Creator Pro v3.3 WinAll + Keygen
Simpo PDF Password Remover v1.2 WinAll + Keygen
PayPal Account Verified ဖြစ်အောင်ဖွင့်နည်း ဖြည့်စွ...